Ciidanka booliska Galmudug oo gacanta kusoo dhigay gaari laga soo dhacay Puntland (DHAGEYSO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka booliska Galmudug oo gacanta kusoo dhigay gaari laga soo dhacay Puntland (DHAGEYSO)
Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxay sheegayaan in ciidamada maamulka Galmudug ay maanta gacanta kusoo dhigeen gaari ay laheyd wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka ee maamulka Puntland Farxiyo Yuusuf Xirsi oo uu dhawaan lasoo baxsaday darawalkeedda.
Ciidamada booliska maamulka Galmudug oo howlgal ballaaran ka sameeyay koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa u suurto gashay inay gacanta kusoo dhigaan ninkii darawalka u ahaa wasiir ku-xigeenka iyo gaarigii uu lasoo baxsaday.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka ee maamulka Puntland Farxiyo Yuusuf Xirsi oo hadal kooban ka jeedisay xarunta taliska qeybta magaalada Gaalkacyo ee maamulka Galmudug ayaa marka hore uga mahad-celisay maamulka Galmudug, gaar ahaan ciidanka booliska maamulkaasi dadaalka weyn oo ay dib ugu soo celiyeen gaarigeeda.
Waxay sheegtay in Galmudug iyo Punland ay yihiin dad walaalo ah, islamarkaana jecel inay si nabad oo walaaltinimo ku jirto ay ku wada noolaadaan, iyadoona dhinaca kale labada dhinac ugu baaqday in mid laga ahaado waxkasto oo amniga labada dhinac dan u ah.
Dhinaca kale, taliyaha qeybta booliska maamulka Galmudug Maxamed Nuur Cali Gadaar oo isna warbaahinta goobtaasi kula hadlay ayaa sheegay in ninka darawalka u ahaa wasiir ku-xigeenadda iyo gaarigii uu lasoo baxsaday gacanta lagu soo dhigay.
Wuxuu taliyaha sheegay in furaha gaariga lagu wareejiyay wasiir ku-xigeenadda wasaaradda haweenka ee maamulka Puntland Farxiyo Yuusuf Xirsi, islamarkaana ninkii gaariga lasoo baxsadayne xabsiga uu ku jiro.
Ciidamada booliska ee maamulka Galmudug ayaa maalmihii ugu dambeysay howlgalo ammaanka lagu xaqiijinaayo ka waday deegaanada ay gacanta ku haayaan, waxayna howlgaladaasi yihiin kuwa looga hortagaayo kooxaha burcadda ah.